တာလီဘန်စစ်သွေးကြွများ ရှေ့တိုးလာခြင်းကြောင့် အာဖဂန်တပ်များအား ဆက်လက်ထောက်ပံ့မည်ဟု အမေရိကန်ပြော - Xinhua News Agency
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင် Kunduz မြို့ Kandak Anayat ကျေးရွာတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၃ ရက်က တာလီဘန်အား ခုခံတိုက်ခိုက်ရန် လုံခြုံရေးယူထားသည့် အာဖဂန်အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဝါရှင်တန်၊ဩဂုတ် ၁၀ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ပြီးခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်အတွင်း မြို့ရွာပေါင်းများစွာကို တာလီဘန်စစ်သွေးကြွများက တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အာဖဂန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ထောက်ပံ့ကူညီရန် အမေရိကန်စစ်တပ်က ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်က ဩဂုတ် ၉ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင် လုံခြုံရေးအခြေအနေသည်“ မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ရှိမနေဘူးဆိုတာ သိပ်ကိုရှင်းပါတယ်” ဟု ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ် သတင်းပြန်ကြားရေးမှူး John Kirby က သတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ ဘောင်ထဲကနေပြီး သူတို့ကို ဆက်ပြီး ထောက်ပံ့ကူညီသွားမှာပါ ၊ လုပ်လို့ရတဲ့အချိန်လုပ်လို့ရတဲ့အထိပေါ့ ၊ နားလည်ထားရမှာက အဲဒီလိုလုပ်လို့ရတာဟာ အမြဲတမ်းတော့ရနေမှာမဟုတ်ပါဘူး” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ “ ဒါပေမယ့် လုပ်လို့ရတဲ့အချိန် လုပ်လို့ရတဲ့အထိ အထူးအခြေအနေတွေမှာ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့အတူ သူတို့ကို ဆက်ပြီး အကူအညီပေးသွားမှာပါ” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အာဖဂန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် တာလီဘန်တို့အား ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရန် စွမ်းရည် နှင့် အခွင့်အရေးများစွာရှိကြောင်း ၊ နိုင်ငံရေး နှင့် စစ်ရေး ခေါင်းဆောင်မှုနှစ်ခုစလုံးတွင် ခွန်အားအပြည့်ရှိရန် အာဖဂန်အစိုးရအနေဖြင့် အလေးအနက်ထားလုပ်ဆောင်သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်က အာဖဂန်တွင် ၎င်းတို့၏ စစ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းကို အဆုံးသတ်ရန် အမိန့်ပေးထားသည့် နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ဖြစ်သော ဩဂုတ် ၃၁ ရက် နောက်ပိုင်းတွင် အာဖဂန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအတွက် လေကြောင်း ပစ်ကူမှုများကို အမေရိကန်အနေဖြင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးသွားရန် အစီအစဉ်ရှိမရှိ သတင်းထောက်၏ မေးမြန်းချက်အပေါ် Kirby ကဖြေကြားရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
ပုန်ကန်သူအုပ်စုက စစ်မြေပြင်တွင် လျင်လျင်မြန်မြန် ရှေးတိုးသိမ်းပိုက်လာခြင်း နှင့် အပြင်းအထန်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားပြီးနောက် ပြည်နယ်မြို့တော် ၆ ခုကို သိမ်းပိုက်လိုက်ခြင်းတို့ကြောင့် အမေရိကန်စစ်တပ်သည် ပြီးခဲ့သောရက်များအတွင်း တာလီဘန်စစ်သွေးကြွများအား လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်အတွင်း တာလီဘန်စစ်သွေးကြွများက အစိုးရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ဆက်လက်ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အာဖဂန်နိုင်ငံအတွင်းရှိ မြို့ရွာအများအပြားနှင့် နိုင်ငံ၏ ပြည်နယ် ၃၄ ခုအနက် ထက်ဝက်ခန့်တွင် ကြီးမားသော မြေပြင်တိုက်ပွဲများ နှင့် လမ်းပေါ်တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လုံခြုံရေးအခြေအနေဆိုးရွားလာခြင်းကြောင့် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းရှိ အမေရိကန်နိုင်ငံသားများအားလုံးအနေဖြင့် မှီရာလေယာဉ်ခရီးစဉ်များဖြင့် နိုင်ငံမှ ထွက်ခွာသွားကြရန် ကဘူးလ်မြို့ရှိ အမေရိကန်သံရုံးက အသိပေးတိုက်တွန်းထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
WASHINGTON, Aug.9(Xinhua) — The Pentagon said on Monday that the U.S. military will continue to support Afghan troops as Taliban militants seized several cities over the weekend.
The security situation in Afghanistan is “clearly not going in the right direction,” Pentagon Press Secretary John Kirby told reporters inabriefing.
“We will continue to support them with the authorities we have, where and when feasible, understanding that it’s not always going to be feasible,” he said. “But where and when feasible, we will continue to support them with airstrikes, for instance.”
Given the deteriorating security situation, the U.S. Embassy in Kabul on Saturday urged all Americans to leave the country immediately via available commercial flights
Photo- An Afghan special force member attendsamilitary operation against the Taliban fighters in Kandak Anayat village of Kunduz city, Afghanistan, July 23, 2021. (Photo by Ajmal Kakar/Xinhua)